Sina Unique cast iron frying pan fonosana azo ampiasaina ho fanamboarana fanendasana sy orinasa | SANXIA
Ny sarom-panendasana vy tsy manam-paharoa dia azo ampiasaina ho lapoaly
Famaritana:40240 * 60mm
lanja:Manodidina ny 3,8kg
Tombony tsy manam-paharoa:Ny fonony dia azo ampiasaina amin'ny tanjona roa ary azo ampiasaina ho lapoaly
Ity vokatra ity dia tsy vilany fotsiny, fa fitambarana vilany roa. Izy io dia afaka mamaly ny filan'ny steak sy ny elatry ny akoho, nefa koa mahafeno ny tanjona hikolokoloana sy hanendasana legioma.
Ireo takelaka ireo dia efa za-draharaha sy vonona hampiasaina, saingy mety mila manaova azy indray ianao mba hahavitana milamina sy tsara kokoa. Tonga lafatra amin'ny fandrahoana steak, panini, legioma, sns. Ny habeny malala-tanana dia manome toerana fandrahoan-tsakafo be dia be, ary azo ampiasaina ao anaty lafaoro na eo ambony afon-dasy.
Io famirapiratana tsara amin'ny lakozia vy io dia mariky ny lapoaly efa za-draharaha, izay tsy mandoko mihitsy. Ny bonus ho an'ny fahasalamana dia mazava ho azy fa tsy mila mampiasa menaka gads ianao hanamboarana ovy mena na akoho amam-borona rehefa handrahoana vy. Mandrosoa ny takelaka vy-nao, sarony ny vilan'ny vilany feno sira masira kosher sy menaka fahandro iray santimetatra avy eo hafanana mandra-pahatonga ny setroky ny setroka. Arotsaho am-pitandremana ao anaty lovia ny sira sy ny diloilo, avy eo mampiasa bolongana lamba famaohana taratasy hikosehana ny ao anaty lapoaly mandra-malama.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana lovia vy dia solon'ny lapoaly tsy fandoroana dia ny fisorohana ireo zavatra simika manimba izay hita ao anaty vilany tsy vita amin'ny lafaoro. Isaky ny fampiasana azy tsirairay, ary indrindra rehefa avy manasa azy amin'ny rano ianao, dia tsy maintsy maina sy arotsaka amin'ny diloilo ny vilany mba haharetana maharitra.
Ny fitaovana fandrahoana vy rehetra anay dia PFOA MAIMAIM-POANA ary PTFE MAIMAIMPOANA.
Ny teknolojia famotehana sy tsy harafesina dia mamaha ny olan'ny harafesina mora vilany vy. Ity teknolojia ity dia afaka manatsara ny hamafin'ny tany sy ny hakitroky ny vilany vy, ary mahatonga ny vilany hanana fahaizana manohitra harafesina ary tsy miankina amin'ny fomba fikojakojana ny olana intsony, ary mora sy tsotra ampiasaina izy io.
Tsy misy firakotra simika ampidirina etỳ ambonin'ny tany, mba tsy ho voan'ny hafanana ambony ny fandrahoan-tsakafo ary tsy hamokatra akora manimba ny vatan'olombelona. Raha ny vokatry ny vilany tsy misy kitay, amin'ny alàlan'ny fampiasana isan'andro ihany no ahafahan'ny mpahandro mandray ny menaka. amin'ny sakafo, mahatonga ny rindrina anatiny ho lasa malama sy malama. Rehefa mandeha ny fotoana dia tsy dia hihasarotra ireo fitaovana fandrahoan-tsakafo hifikitra amin'ny vilany. Izy io dia mahasalama kokoa ary mateza kokoa noho ny vilany tanimanga tsy misy tanimanga tanàn-dehibe, maro ny fianakaviana toy ny fahaizany sy fahasalamana.
Teo aloha: Skelet vy vy vy sofina roa mahazo loka mena teboka mena
Manaraka: Fahasalamana ary tsy dia misy setroka solika setroka fanendasana vy
16l Vy fanendasana vy 316l
lat Ambany Fry Frying
namel Non Frying Pan
Tsy misy lapoaly fikosoham-bolo
ron Nitride Fry Pan
t Stainless Steel Turkey Fryer Pot
urkey Fryer Stainless Steel
Ny lafaoro holandey mahasalama dia manana mahandro tsara kokoa ...
Atsipazo fanendasana vy miaraka amina tapa-kazo tokana ...
Kofehy vy vy kambana vy kofehy mandresy ...
namel Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, xtreme Iron Skillet, Cast Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet, ncoated Cast Iron Skillet,